Ukuveliswa kokutya kwezilwanyana zasekhaya ngenja kunye nekati,Inja yokutya kwepellet
1.Umgca wokuveliswa kokutya kwezilwanyana zasekhaya ikakhulu wenziwe ngenkqubo yokunyanga izixhobo ezingafunekiyo ,inkqubo extrusion, Inkqubo yokomisa, Inkqubo yokuncamathisela kunye nenkqubo yokulawula.
2.umtya wokutya wesilwanyana esinokutya okuphezulu kunye nokusebenza okuzenzekelayo, whice inika ithuba lokulawula ukwandiswa kwesongezelelo ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokulawula ukuthungwa kwemveliso yokugqibela.
Umgca wokuveliswa kokutya kwezilwanyana zasekhaya ikakhulu wenziwe ngenkqubo yokunyanga izixhobo ezingafunekiyo ,inkqubo extrusion, Inkqubo yokomisa, Inkqubo yokuncamathisela kunye nenkqubo yokulawula, umtya wokutya wesilwanyana esinokutya okuphezulu kunye nokusebenza okuzenzekelayo, whice inika ithuba lokulawula ukwandiswa kwesongezelelo ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokulawula ukuthungwa kwemveliso yokugqibela. Bonke oomatshini benziwa ngentsimbi engenagwele, Ukuveliswa kokutya kwenja kunokwakhiwa okufanelekileyo kunye nesantya esiphezulu; Izikere zenziwe ngentsimbi yentsimbi, ngesakhiwo senkqubo yebhloksi yokwakha kunye nomsebenzi wokucoca.
Malunga nokuveliswa kokutya kwezilwanyana zasekhaya
* Ulawulo oluchanekileyo lweeparamitha zenkqubo kunye nokufaka ezenzekelayo ukuqinisekisa umgangatho wegreyule: i-gelatinization, ukwanda, Ubunjani kunye nomgangatho ongaguqukiyo. Ezi nqobo ezisemgangathweni zinokufezekiswa kuba i-screws ziqinisekisa ukuqhubekeka kakuhle kwaye kupompa ngokufanelekileyo. Ukulungiswa kwepasele ye-viscous akuxhomekekanga kungxwabangxwaba phakathi kwesikali kunye nomgqomo. Ukulawulwa kobushushu bokuzenzekelayo okuzenzekelayo kunye neesistim zohlengahlengiso lwendlela yokutya yenja, ulungelelwaniso lwesikulufu sokumodareyitha kunye nezantya zesikrelekrele ezilungiselelwe ngokulula kwaye zinegalelo ekusebenzeni kwemveliso yokutya yenja ephezulu.
* Imveliso yokutya yezilwanyana enengqondo : ulawulo lweresiphi (ukurekhoda, fikelela, ukubeka esweni), ulawulo lwenkqubo (qala / ume), izixhobo zokufaka, ulawulo kunye nokugcinwa. Oomatshini abazihambelayo be-automation banegalelo kwiindleko eziphantsi zokusebenza kunye nokwenza kube lula ukuvelisa igama ngokufanayo.
* Iimilo zokuyila kunye nokugqibezela ngokusebenzisa ii-die ezikhethekileyo ukwenza iimilo ezinobuchule kunye neemveliso ezenziwe ngumbhalo owahlukileyo (ekhutshiwe) ,Ukuguquguquka kwesithako ukuze kusetyenziswe uluhlu olubanzi lwezinto ezingalunganga ezinamafutha aphezulu xa kufuneka njalo.
* Ukucutha ukugcinwa komtya kwimveliso yokutya kwenja, ukusebenzisa iinxalenye ezisemgangathweni zokwenza izinto zokomisa kunye neyomileyo, ukufikelela ngokulula kumacandelo oomatshini abahlukeneyo.
* Umthamo wemveliso yokutya kwenja: 100 kg / h ukuya ku 1,000 kg / h
Itshathi yokuhamba kokutya kwenja :
Ukulungiselela isixokelelwano sezinto ezingafunwayo → Inkqubo yokuxuba → Inkqubo eyandisiweyo
Ngolwazi lolwazi ,siya kutshatisa imveliso yokutya yenja ngokwemfuno yabathengi
Yintoni esibonelela ngemveliso yokutya kwezilwanyana zasekhaya
1.) Inkonzo yokubonisana ngaphambili, ngexesha,nasemva kokuthengisa;
2.) Ukucwangciswa kweprojekthi kunye nenkonzo yoyilo ye-pellet yokutya kwenja;
3.) Ukulungiswa kwezixhobo kude kube yonke into isebenze;
4.) Ulawulo lokutya okude kwesityalo esithutha umgama omde ukusuka kumzi mthengisi ukuya kwindawo ebizwa ngumthengi;
5.) Uqeqesho lolondolozo lwezixhobo kunye nokusebenza ngokobuqu;
6.) Iindlela ezintsha zemveliso kunye neefomula;
7.) Nikeza 1 unyaka iwaranti epheleleyo kunye nenkonzo yokugcinwa kwexesha.
Ividiyo yokuveliswa kokutya kwenja